Ophelia nke ebe oba mmiri nwere ike iru Galicia | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị chere na anyị ga-enwe izu "nkịtị", nwere okpomọkụ karịa ihe ga-adị n'oge a na enweghị amụma mmiri ozuzo, mana Ophelia, oké mmiri ozuzo ọhụrụ nke oge ifufe Atlantic, nwere ike ịhapụ oke mmiri ozuzo na northwest Spain.
Ọ bụ ihe ịtụnanya dị ịtụnanya, ebe ọ na-esoghị usoro ọdịda anyanwụ-ọdịda anyanwụ nke ikuku mmiri a na - esokarị, mana ọ na - aga ọdịda anyanwụ, chee ihu na Azores.
1 Ophelia, ihe di egwu puru iche
2 Gịnị bụ trajective ya nwere ike ịbụ?
Ophelia, ihe di egwu puru iche
Ugbu okpomọkụ nke Oke Osimiri Atlantic na Spain na Portugal.
Foto - Meteociel.fr
Oké osimiri na-ekpo ọkụ, nke ihe dịka 22 Celsius ma ọ bụ karịa, dị mkpa maka ajọ ifufe iji guzo ma nọrọ ogologo oge ma ọ bụ karịa, mana Ophelia ga-enwe ya ihe isi ike. Ọ bụ ezie na n’akụkụ ụwa a, ọnọdụ okpomọkụ nke oke osimiri dị elu karịa ka o kwesịrị ịdị, ọ naghị ekpo ezigbo ọkụ nke na ọ ga-aghọ ajọ ifufe dị ka nke na-etolite na mmiri ebe okpomọkụ. Bụlagodi, ọ bụrụ na ya na ụfọdụ ikuku oyi na-emekọrịta ihe n'ogologo ọ nwere ike ịnọgide na-enwe nkwarụ nke ga-eme ka ntụgharị ahụ ogologo.
Gịnị bụ trajective ya nwere ike ịbụ?
Foto - Accuweather.com
O dobeghị anya ụzọ ọ ga-esi, ma a maara na ọ na-aga ọdịda anyanwụ. Ebee ka? Amaghi ya. Ikekwe ọ metụtara ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Galicia, ma ọ bụ na-aga United Kingdom. E nwere ọtụtụ obi abụọ banyere ya. Ruo ugbu a, ihe a maara bụ na ọ nwere nrụgide nke 996mb, na oke ikuku nke ifufe nke 120km / h.
N'ọnọdụ ọ bụla, echi, Tọzdee, ọ nwere ike iru ajọ ifufe ahụ, ya na ikuku ifufe karịrị 150km / h, mana bụrụ na ị gafere Galicia, ihe nwere ike ime n'etiti Sọnde na Mọnde, ọ gaghị abịa dị ka ajọ ifufe kama dị ka ajọ ifufe ebe o guzobere na mmiri na-abụghị nke ebe okpomọkụ.
Anyị ga-ahụ ihe ga-eme n’ikpeazụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Ophelia oke ifufe nwere ike rute Galicia